Latest Myanmar News - Page 271 of 293 - News & Media
နောင်တ (၁၀) ပါး ၁။ ငယ်စဉ်အခါက ပစ္စည်းဥစ္စာမရှာခဲ့၍ အိုမင်း ရင့်ရော် နောင်သောအခါမှ မရှိဆင်းရဲ မွဲပြာကျသောကြောင့် နောင်တကြီးစွာရခြင်း။ ၂။ ငယ်ရွယ်စဉ်က ပညာသင်ရန် အခွင့်ရေးရပါလျှက် ဆိုးပေတေကာ ကျောင်းပြေးလုပ်၍ နောင်အခါ အသက်မွေးမှု မပြည့်စုံခြင်းကြောင့် နောင်တကြီးစွာရခြင်း။ ၃။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ ကုန်းချောစကားဖြင့် ရန်တိုက်ပေးခဲ့မိသောကြောင့် သေရာညောင်စောင်း လဲလျောင်းမိသောအခါ ငါပြုခဲ့မိတာ မှားလေခြင်းဟု နောင်တကြီးစွာ ရခြင်း ။ ၄။ သတ္တဝါများအား သနားမဖက် ရက်စက်စွာ သတ်ခဲ့မိခြင်းကြောင့် သက်ရွယ်ကြီးရင့်လာသောအခါ ယူကြုံးမရဖြစ်ကာ နောင်တကြီးစွာ ရခြင်း။ ၅။ မသွားလာအပ်သော သူမယားနှင့်် သမီးများကို သွားလာပေါင်းသင်း ဖျတ်ဆီးမိခြင့်ကြောင့် မိမိသားသမီးရလာသောခါ နောင်တ တဖန် ပူပန်ရခြင်း။ ၆။ များစွာသော ပစ္စည်းဥစ္စာ … Read more
ကင်ပွန်းသီးက လူသိများတဲ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေထဲတစ်မျိုးပါ။ သဘာဝရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သလို၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာပြီး ပြန်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကင်ပွန်းသီးကို ရေနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါ ဆပ်ပြာလိုမျိုး အမြှုပ်လေးတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ကင်ပွန်းသီးကို အဝတ်တွေလျှော်တာကနေစလို့ လက်ဝတ်ရတနာတွေအ ရောင်တင်တာမျိုးအထိ အမျိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လူတော်တေ်ာများများကတော့ ကင်ပွန်းသီးက ဆံသားအတွက် ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေတယ်လို့သိထားကြပါတယ်။ ကင်ပွန်းသီးက ဆံသားအတွက်တင်မကဘူး။ အရေပြားနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအထောက်ကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ကင်ပွန်းသီးကို ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက သဘာဝဆံသားထိန်းသိမ်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ပွန်းပင်မှာ ဆံသားကိုနက်မှောင်သန်စွမ်းစေတဲ့ ဆာဖိုနင်ဓာတ်ပါဝင်နေပါတယ်။ ကင်ပွန်းသီးက အထိခိုက်လွယ်တဲ့အရေပြားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ရွေးချယ်သင့်တဲ့ သဘာယအလှအပထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ ကင်ပွန်းပင်က မီတာ ၂၀ လောက်အထိမြင့်တတ်ပြီး နှစ်စဉ် မိုးရေချိန် စင်တီမီတာ ၁၅၀ ကနေ စင်တီမီတာ ၂၀၀ အထိရရှိတဲ့ဒေသတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ရွှံ့စေးမြေတွေမှာသာ ပေါက်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဖတ်ရှုသူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်။ ကုလားကင်ပွန်းသီးနှင့် မြန်မာကင်ပွန်းချဉ်သီးနှစ်မျိုးအား အကျိုးသွားရှာဖွေကြည့်ရာတွင် … Read more
စိန်တစ်လုံးကျောက်ကျော လုပ်နည်းပါ ကျောက်ကျော 25gကိုရေနို့ဆီဘူး ၆ဘူးပါ အောက်ခံအလွှာအတွက် ကျောက်ကျော25g အတွက်နို့စိမ်း၂ဘူးနဲ့ရေပေါင်းပြီးရေ၆ဘူး သကြား ၂၀သားခန့် ဆား အားလုံးထည့်မွှေပြီးအရသာမြည်းပါ။ အချိုလိုလျှင်သကြားထည့််ပါ ။မီးဖိုပေါ်တင်ပြီးဆက်တိုက်မွှေပါ ဆူပွက်လာလျှင်အောက်ခံကိုလောင်းပါ ။အအေးခံပါ။ အပေါ်သရက်သီးအတွက် သရက်သီးအရည်ရအောင်ကြိတ်ပါ သရက်ရည်အပါအဝင်ရေ၆ဘူး ။ဆား ၊ကျောက်ကျော25g ထည့်မွှေပါ ၊အချိုကိုလိုမှသကြားထည့်ပါ သဘာဝအချိုရှိလို့ပါ ။ဆူပွက်လားပြီး သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းညှစ်ပါ။ နို့စိမ်းအလွှာကအပေါ်ယံခဲပါက သရက်သီးကိုဇွန်းဖြင့်ဖြေးဖြေးလောင်းပါ သွန်လိုက်ပါနို့နဲ့ရောသွားတတ်လို့ပါ အေးခဲလာပါကလှီးလို့ရပါပြီ သရက်သီး၁၀လုံးခန့်သုံးပါ။ ခရစ်ဒစ် Unicode စိနျတဈလုံးကြောကျကြော လုပျနညျးပါ ကြောကျကြော 25gကိုရနေို့ဆီဘူး ၆ဘူးပါ အောကျခံအလှာအတှကျ ကြောကျကြော25g အတှကျနို့စိမျး၂ဘူးနဲ့ရပေေါငျးပွီးရေ၆ဘူး သကွား ၂၀သားခနျ့ ဆား အားလုံးထညျ့မှပွေီးအရသာမွညျးပါ။ အခြိုလိုလြှငျသကွားထညျ့ပါ ။မီးဖိုပျေါတငျပွီးဆကျတိုကျမှပေါ ဆူပှကျလာလြှငျအောကျခံကိုလောငျးပါ ။အအေးခံပါ။ အပျေါသရကျသီးအတှကျ သရကျသီးအရညျရအောငျကွိတျပါ သရကျရညျအပါအဝငျရေ၆ဘူး ။ဆား ၊ကြောကျကြော25g ထညျ့မှပေါ … Read more
ဝမ်းတွင်းရောဂါများ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အရိုးကျန်းမာရေးနှင့် အစာအိမ် လေပူဆန် တို့အတွက် နှမ်းဆီသုံးနည်း။ “နှမ်းဆီ၏ကျန်းမာရေးအကျိူးကျေးဇူးများ” နှမ်းဖြူဆီ၊ နှမ်းနက်ဆီ နှစ်မျိုးလုံး ဆေးအသုံးပြုခြင်းပါ။ နှမ်းမှာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုဓာတ် များစွာပါဝင်သည်။ခါးသက်သော အရသာ ရှိသည်။ ဇင့်ဓာတ်၊ သံဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် သွေးအားကောင်းစေသည်။ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် နှမ်းဆီကို ဟင်းချက်ဆီအဖြစ် နေ့စဉ်အသုံးပြုကြသည်။ အကြောအဆစ်ရောင်နေသူများ နှမ်းဆီ၊ မုန်ညင်းဆီ ၂ မျိုးရောပြီး ပရုပ်အနည်းငယ်ထည့် အပူပေးလိမ်းရသည်။နှမ်းဆီသည် နုညံ့၏။ စိမ့်ဝင်တတ်၏။ သည်းခြေကို ပြုတတ်၏။ သလိပ် ပညာ ခွန်အား. သုတ်အားတို့ကို ပွားစေ၏။ အရေပြားကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ဆဲလ်အသစ်များကို ဖြစ်စေပြီး အသားအရေ ကောင်းစေသည်။ အနည်းငယ် နှုတ်မြိန်စေ. ဆံပင်ကို ကောင်းစေ၏။ အရောင်အဆင်းကိုလည်းဖြစ်စေ၏။ လေ … Read more
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၃-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၃-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်အဖြစ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၇) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၇) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၅၄)ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁)ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။ ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၁၃-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း (၁၈၁) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား စစ်ဆေးမှုများတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ … Read more
Maskကြာကြာတပ်လို့ မူးဝေလာလျှင် ဒီလိုဖြေရှင်းပါ
Mask N95 ကို ၁ နာရီ ဆက်တိုက် မတပ်ပါနှင့်..၁ နာရီကျော်လျှင်ဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာ နာရီဝက်ခန့် Maskဖွင့်ပြီးနားပါ………… အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၁ နာရီကျော် ဆက်တိုက် တပ်ထားလျှင် သွေးထဲမှာ အောက်စီဂျင်နည်းပြီးအက်စစ်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်….. အဲ့လိုဖြစ်လာလျှင် မူးဝေ လာတတ်ပါသည်….. ၃ ထပ်ပါ အပြာအစိမ်း Mask တွေသည်၂ နာရီ တစ်ကြိမ်… ပိတ်စ နှင့် ပြုလုပ်ထားသောMask သည် ၄ နာရီ တစ်ကြိမ် ဖွင့်ပြီးဘေးကင်းသောနေရာတွင်အသက်ရူ ရပါသည်…… သိရှိနိင်ရန် တင်ပြခြင်းပါ…….. ခရစ်ဒစ် Unicode Mask N95 ကို ၁ နာရီ ဆကျတိုကျ မတပျပါနှငျ့..၁ နာရီကြျောလြှငျဘေးကငျးတဲ့နရောမှာ နာရီဝကျခနျ့ Maskဖှငျ့ပွီးနားပါ………… အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော၁ နာရီကြျော ဆကျတိုကျ တပျထားလြှငျ သှေးထဲမှာ … Read more
ဒူးရင်းသီးကောင်းရွေးဝယ်နည်း ဒူးရင်းဝယ်တဲ့အခါ အချက်(၃)ချက်ကို ကြည့်ပြီးရွေးဝယ်ပါ။ (၁) ဒူးရင်းသီးရဲ့ဆူးတွေဟာတိုနေရပါမယ်။ (၂) ဒူးရင်းသီးရဲ့ ဆူးလိုင်းတွေဟာ ကျဲနေရပါမယ်။ (၃) ဒူးရင်းသီးရဲ့ အညှာဟာ ဖြောင့်တန်းနေရပါမယ် ဒီအချက်(၃)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒူးရင်းသီးတွေဟာ အနံ့၊ အရသာတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဒူးရင်းသီးကောင်းတစ်လုံးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါပဲ။ ဒူးရင်းသီးမှဲ့ မမှဲ့ကိုအချက်(၂)ချက်နဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ (၁) ဒူးရင်းသီးကိုနမ်းကြည့်ပြီး မှဲ့မမှဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ လှိုင်လှိုင်မွှေးနေပြီဆိုရင် အသင့်စားလို့ရနေပြီဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ (၂) ဒူးရင်းသီးကို လှုပ်ခါကြည့်ရင်လည်း မှဲ့ မမှဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ မှဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာ အတွင်းကအဆံဟာ မသိမသာလေး ချောင်နေတာကိုသိထားရပါမယ်။ ဒူးရင်းသီး မှဲ့ မမှဲ့ကို ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပေါင်းပြီး စမ်းသပ်လိုက်ရင် ရာနုန်းပြည့် မှဲ့ မမှဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ မေတ္တာဖြင့်… ခရစ်ဒစ် Unicode ဒူးရငျးသီးကောငျးရှေးဝယျနညျး ဒူးရငျးဝယျတဲ့အခါ အခကျြ(၃)ခကျြကို ကွညျ့ပွီးရှေးဝယျပါ။ … Read more
← Previous Page1 … Page270 Page271 Page272 … Page293 Next →